उपेन्द्र यादवले भन्नुभयो, ‘संविधान संशोधनमा वाम गठबन्धन तयार भए सरकारमा जान्छौँ’ | सहारा टाइम्स
Home » Main-News » उपेन्द्र यादवले भन्नुभयो, ‘संविधान संशोधनमा वाम गठबन्धन तयार भए सरकारमा जान्छौँ’
उपेन्द्र यादवले भन्नुभयो, ‘संविधान संशोधनमा वाम गठबन्धन तयार भए सरकारमा जान्छौँ’
SAHARA TIMES Sunday, January 28, 20180No comments
काठमाण्डौ माघ १४ गते । संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संविधान संशोधनका लागि वाम गठबन्धन तयार भए आफूहरु सरकारमा सहभागी हुन तयार रहेको बताउनु भएको छ ।
राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्नु हुँदै अध्यक्ष यादवले संविधान संशोधनका मुद्दाका बारेमा गठबन्धनले स्पष्ट धारणा दिनुपर्ने र उक्त धारणासँग आफूहरु सहमत भएको खण्डमा सरकारलाई सहयोग गर्न तयार रहेको बताएका हुन् ।
अध्यक्ष यादवले माओवादी र कांग्रेस विगतमा नै संविधान संशोधनका लागि तयार भएको स्मरण गराउँदै अब एमालेले आफ्नो धारणा स्पष्ट पार्नुपर्ने बताउनुभयो । “बल एमालेको कोर्टमा छ, एमालेभित्र पनि अध्यक्ष केपी ओलीजी को कोर्टमा बल छ, कस्तो गोल हान्नुहुन्छ त्यो भने हेर्न बाँकी छ । हामी सरकारसँग सहकार्य गर्न तयार छौँ”–उहाँले भन्नुभयो ।
उहाँले भन्नु्भयो, “एमालेको स्पष्ट धारणा के हो ? त्यो धारणासँग हाम्रो धारणा मेल खान्छ कि खाँदैन ? हिजोका दिनमा एमालेले संविधान संशोधनको विरोध गर्यो भन्दैमा अहिले पनि गर्छ भन्ने छैन ।”
यद्धपी उहाँले एमाले–माओवादी नेतृत्वको बाम गठबन्धनले सरकार चलाउनका लागि स्पष्ट जनादेश पाएकाले आफूहरु सरकारमा जान आवश्यक भने नरहेको जिकिर गर्नुभयो ।
“हाम्रो पार्टीले सरकारमा जाने जनादेश पाएको छैन । तर गठबन्धनले हाम्रो आवश्यकता महशुस गर्यो भने हामी सहभागी हुन तयार छौँ”–अध्यक्ष यादवले भन्नुभयो, “उनीहरुको बहुमत छ हामी किन सरकारमा जाने ? बहुमत नभएको भए सहयोगको आवश्यकता पर्न सक्थ्यो ।”
आफूहरु अहिलेपनि आन्दोलनरत पक्ष भएकाले संविधान संशोधनको मुद्दा छिनोफानो नभएसम्म सरकारमा सहभागी हुननसक्ने उहाँको भनाई थियो ।
प्रदेशनम्बर २ मा भने फोरमको नेतृत्वमा सरकार बन्ने उहाँले दावी गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘२ नम्बर प्रदेशमा राजपासँगको सहकार्यमा हाम्रो पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बन्छ, यसमा कुनै दुईमत छैन् ।’
प्रदेश नम्बर दुई सबैभन्दा बढि पिछडिएको क्षेत्र भएकाले त्यहाँ बन्ने सरकारले आर्थिक विकासलाई प्राथमिकतादिने यादवको स्पष्टोक्ति थियो । उहाँले भन्नुभयो, “सबैभन्दा कम स्रोत साधनभएको, पिछडिएको र सिंहदरबारले उपेक्षा गरेको प्रदेश २ नम्बर हो, आर्थिक पछौटेपन, गरिबी र बेरोजगारी ज्यादा भएकाले आर्थिक विकासको आवश्यकता छ ।”
प्रदेश नम्बर दुईको विकासका लागि केन्द्रीय सरकारले पनि सहयोग गर्नुपर्ने उहाँको भनाई छ । “गणतन्त्र नेपालमा पनि त्यहाँ ध्यान नपुगे कहिले पुग्छ ? ”उहाँको प्रश्न छ ।